I-Xanax kunye notywala: Ngaba kukhuselekile ukuthatha iindlela zokulwa noxinzelelo ngotywala? - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Imidlalo Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Iziyobisi Vs. Umhlobo Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Impilo Izilwanyana Zasekhaya Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo, Iindaba Ukuphuma Ekuhlaleni Impilo-Ntle Uluntu, Inkampani Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Inkampani, Iindaba
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Ngaba kukhuselekile ukuthatha iyeza lokuthintela uxinzelelo ngotywala?
Imfundo yezeMpilo Umxube
Abanye abantu basela utywala ukunciphisa uxinzelelo. Abanye bathatha iXanax. Abanye bathatha iXanax kwaye utywala, njengeglasi okanye ezimbini zewayini. Kodwa oku, oogqirha noosokhemesti bathi, akukhuselekanga.
Akufanele udibanise i-benzodiazepines kunye notywala, utsho UAnna Lembke, MD , Umlawuli wamayeza amakhoboka eStanford University School of Medicine ePalo Alto, California. Iziphumo, uthi, zinokubulala.
Ukuxuba utywala kunye noxinzelelo meds
I-Benzodiazepines ibhekisa kwiklasi yeziyobisi Xanax (alprazolam) kunye nezinye ezaziwayo amayeza anti-ixhala , njenge Ativan (lorazepam) kunye Valium (diazepam), ngena kwi.
Ukuba udibanisa [i-benzodiazepines kunye notywala] unganobuzaza Ukusebenzisana kweziyobisi , kubandakanya ukugqithisa okubulalayo, utshilo.
Inxalenye yesizathu kukuba zombini ezi zithomalalisi. Ngokwabo, banokuphumla izihlunu, bakwenze ubuthongo, kwaye banciphise uloyiko, uloyiko kunye nokuphazamiseka. Ngokudibeneyo, bazenza zonke ezo zinto ngamandla amakhulu. Kodwa ayisiyiyo yonke combo eyenzayo. Ukuwathatha ngaxeshanye kunokukhulisa ukubakho kweziphumo ebezingalindelekanga ezithile, ezinje ngokudakumba kokuphefumla (okwaziwa ngokuba yi-hypoventilation).
Ngokwemigqaliselo, uxinzelelo lokuphefumla kuxa ukuphefumla kwakho kuhamba kancinci ukuya kwinqanaba eliyingozi. Kwaye ukuba oku kuyenzeka, umngcipheko weziphumo ubaluleke kakhulu. Eyona meko imbi kakhulu? [Uye] ulale kwaye uyeke ukuphefumla, utshilo uGqirha Lembke.
Ngelishwa, ukusetyenziswa kotywala kunye neyeza zokuxhalaba zixhaphake ngokwaneleyo ukuba le meko imbi kakhulu ayifakwanga kude. Ukuxhalaba kukugula okuxhaphakileyo e-United States, kuchaphazela i-18.1% yabantu abadala ngonyaka ngamnye, ngokwe Ixhala kunye noMbutho woXinzelelo eMelika . Kwaye oogqirha bamisela i-benzodiazepines ukunyanga uxinzelelo ngamaxabiso anyukayo. A isifundo sipapashiwe kwiJenali yeAmerican Medical Association (JAMA) inika ingxelo yokuba inani lotyelelo logqirha elikhokelele kumyalelo we-benzodiazepine liphantse laphindeka kabini phakathi kuka-2003 no-2015, lisuka ku-3.8 laya ku-7.4%. Ngaphaya koko, i-benzodiazepines iya isiyaxelwa ngokuxhalaba kancinci ukuya kuthi xhaxhe xa ichongelwe uxinzelelo olukhulu, utshilo uLembke.
Ngokumalunga nokusetyenziswa kotywala, i UPhononongo lukaZwelonke lokuSebenzisa iziyobisi kunye neMpilo ndiyifumene Ngo-2016, ama-54.6% abantu abadala abangama-26 nangaphezulu babengabasebenzisi botywala ngoku . Lilonke, i-benzodiazepines ubuncinci yayinoxanduva lwayo Ukusweleka okunxulumene nokudlula ngaphezulu kwe-11,537 ngo-2017 , ngokweZiko leLizwe kuThintelo lweziyobisi.
Ukuthathwa apha kukuba xa usebenzisa i-benzodiazepine yoxinzelelo, qiniseka ukuba uyisebenzisa ngokufanelekileyo. Oku kuthetha ukulinda de iyeza liphume kwinkqubo yakho ngaphambi kokuba ubethe iyure yolonwabo. Ixesha elibekiweyo loku, nangona kunjalo, alibekwanga ematyeni.
Kuxhomekeka kwizinto ezimbalwa, utsho URachel Firebaugh, uGqirha D. , Unjingalwazi oncedisayo wezonyango kwiYunivesithi yaseWashington School of Pharmacy eSeattle. Ucacisa ukuba idosi yonyango kunye nenani lotywala obandakanyekayo zizinto ezibalulekileyo. Ukuba ibiyinto encinci yotywala kunye nedosi encinci ye-benzo, bekuya kubakho umngcipheko ophantsi, utshilo.
Iibenzos kunye neziphumo ebezingalindelekanga zotywala
Ugqirha Lembke uthi abantu mabalinde enye okanye mhlawumbi Mbini Kwiintsuku emva kokuthatha i-benzodiazepine ngaphambi kokuba usele, ugxininisa ukuba ezinye ze-benzodiazepines zisebenza ixesha elide (njengeValium) kwaye ziya kuhlala kwinkqubo yakho ixesha elide kunabanye (iXanax ithathwa njengeyona nto imfutshane). Kwaye ngelixa ebonisa ukuba i-overdoses inokwenzeka kakhulu kubantu abathatha amanye amayeza kunye / okanye iziyobisi zokuzonwabisa (kubandakanya i-opioids), ukwabongoza abantu ukuba bafune unyango kwangoko kwimeko yokurhaneleka kakhulu.
UGqirha Firebaugh uthi imiqondiso yokugqithisa libanda inokubandakanya ukuphefumla nzima, ukulahleka kwengqondo, kunye nokungakwazi ukuvusa umntu. Kwakhona ujonge isiyezi, intetho edidayo, ukudideka kunye nobuthathaka.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-benzodiazepines ikhoboka kakhulu, uGqr. ULembke noFirebaugh bathi, ngakumbi kwabo sele besokola nabo ukusetyenziswa gwenxa kotywala okanye ukusetyenziswa gwenxa .
Abantu abaninzi bafumana ii-benzos ezimiselweyo kwaye abazi ukuba banomlutha, utshilo uGqirha Lembke. Eyona nto iphambili kukuba sisebenzisa ii-benzos rhoqo kwaye ngokukhululekileyo. Zizilwanyana ezinobungozi kwaye kufuneka zisetyenziswe kuphela kwiimeko ezinzima kakhulu.
I-Adderall kunye notywala
UBenadryl kunye notywala
UTylenol kunye notywala
I-FDA ivuma i-Gilenya generic
Hypoxia vs.hypoxemia: Thelekisa oonobangela, iimpawu, unyango kunye nokunye
wenza ntoni latuda kwingqondo
ilungile nini ikholine yokukhwehlela isiraphu
Yintoni linzess 145 mcg esetyenzisiweyo
Ngaba i-viagra ikunika nzima kuyo
yintoni umahluko phakathi kwe-ritalin kunye ne-adderall
Unyango losulelo kunyango kunyango lokurhawuzelela